चौविस जिल्लाका २७७ स्थानीय तहको मतगणना भयो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
चौविस जिल्लाका २७७ स्थानीय तहको मतगणना भयो
मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:२९ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, असार २० गते । प्रदेश नं १, ५ र ७ मा असार १४ गते भएको निर्वाचनको हालसम्म २४ जिल्लामा २७७ स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छ । निर्वाचन आयोगमा रहेको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार २७८ स्थानीयतहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भइसकेको औपचारिक रुपमा जानकारी आएको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार अब ११ जिल्लाका ५६ स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको छ । मुलुकका ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको निर्वाचन यही असार १४ गते भएको थियो । पछिल्लो पटक कञ्चनपुर, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापाका एक÷एक स्थानीय तहमा मतगणनाको क्रममा मत सङ्ख्या फरक परेका कारण मतगणना कार्य स्थगन रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
अरु स्थानीय तहमा भने धमाधम मतगणना भइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा नेकपा ९एमाले० र नेपाली काँग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
हालसम्म एमालेले १२१, काँग्रेसले १०५ माओवादी केन्द्रले ३५, सङ्घीय समाजवादी फोरमले छ, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पाँच, राप्रपा तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा दुई र स्वतन्त्रले एक स्थानमा विजय हासिल गरी स्थानीय तहको नेतृत्व लिन सफल भएका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: बेल्डाँडी गाउँपालिकामा एमाले विजयी भयो
NEXT POST Next post: बस पल्टिँदा घाइते सात, तीनको जनाको मृत्यु
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:२९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:२९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:२९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:२९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:२९